3 Kuhle Day Uhambo Kusukela Budapest ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izikhangibavakashi Europe > 3 Kuhle Day Uhambo Kusukela Budapest ngu zemininingwane
Isikhathi sokufunda: 5 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 26/09/2020)
Ngakho uke ekugcineni ukwenzile. Ufake ngeholide lakho emsebenzini, wathenga amathikithi akho indiza salibangisa phezu eHungary kuze kube iholidi ngaphambi esasiwafanele. Futhi ngenkathi yilokho kuhle – ngemva kwakho konke, Budapest yidolobha elihle – musa ukudayisa wena iDemo ngu kuphela ababambelela ezizungeze inhloko-dolobha. Europe iyizwekazi kahle exhunyiwe nezinkulungwane ongakhetha ukuhamba ngesitimela, futhi lokhu kuhlanganisa Hungary. Ngakho-ke uma uke wambona Iziphethu Szechenyi Thermal futhi bejabulela pint ngesikhathi Beer Spa, amabombo edolobheni komunye wale 3 engcono Budapest usuku uhambo ngesitimela.
Idolobha lesibili ngobukhulu e-Hungary futhi yaziwa nangokuthi Capital Omkhulu Hungarian Plain, leli dolobha amatasatasa iyikhaya 200,000 abantu. Sezomlando futhi amahle, Debrecen nje 2 amahora 15 imizuzu kusukela Budapest ngesitimela. eduze kwakhona kwenza lokhu ikhandidethi esihle kakhulu Budapest usuku Uhambo ngesitimela.
Omkhulu Church Debrecen kuyinto ebalulekile leli dolobha, nemisebenzi njengoba iwuphawu yamaProthestani e Hungary. Kukhona futhi iminyuziyamu eminingi ngawe ukuvakashela, ezifana SDPS Museum, okuyinto iyisonto ezinye iziqephu kakhulu mlando zonke Hungary.
Ungakhohlwa zama ezinye ukudla lendawo newayini, kanjalo. Uma ungumsebenzisi sommelier kweqiniso, ungaphuma ngoba “Bikaner”, iwayini okukhiqizwe endaweni ukuthi uhumusha “igazi lenkunzi”. It ikhiqizwa Hungary, encwadini edumile 'eSigodini Beautiful Abesifazane' esifundeni. Yum!
Uma ungumuntu fan of the zokugeza ezishisayo, Debrecen futhi uye nawe embozwe. Ngo sokuhamba avela esikweni, the Aquaticum Spa is more like an indoor amanzi ipaki. Okufakiwe okusezingeni eliphezulu ophahleni oluyingungu futhi ezimibalabala amaslayidi amanzi, these thermal baths are fun for the whole family.
2. Kuhle Budapest Day Uhambo ngu zemininingwane: Vienna, Austria
Ngenxa yalesi entry esilandelayo Budapest usuku Uhambo ngesitimela, siyakucela kokushiya Hungary ngokuphelele futhi ushona Austria, umakhelwane Hungary zasentshonalanga. Inhloko-dolobha ye-Austria, Vienna yidolobha langa futhi ekhaya ukuze phezu 2 abayizigidi ezingu izakhamizi. Thanda esiningi Hungary, Vienna kulele godu eduze iDanube. Ngokungafani edolobheni elincane, Nokho, Vienna ligcwele phama egcwele omakhelwane ezahlukene, iminyuziyamu, ezikhangayo, nezinhlobonhlobo zokudla.
Njengoba zibizwa ngokuthi ama isikhungo amasiko zobuciko, it also sports a thriving coffee scene and you’ll find hundreds of cafes along its winding streets. Vienna futhi iyikhaya Schönbrunn, the summer residence of the Hapsburgs and one of many grand buildings throughout the city.
Uma uhamba ebusika, Vienna uyisidingo stop yayo izimakethe kaKhisimusi. Lezi izimakethe nesenganekwane kukhona lutho iDemo of bemilingo nge twinkling izibani inganekwane, iwayini ashisayo mulled, futhi ukudla okumnandi efudumele.
Nakuba lolu hambo olude ngoba uhambo day kusukela Budapest nge isitimela, kukhona izinketho okusheshayo etholakalayo izinketho engami kukhona. Kungcono kakhulu, uzothola ukuhlola kwelinye izwe European off yakho uhlu ibhakede.
Budapest eVienna Izitimela
3. Kuhle Budapest Day Uhambo ngu zemininingwane: Wiener Neustadt, Austria
Ekugcineni, sike ukuza entry lwethu lokugcina, idolobha kwaphakathi nendawo etholakala eningizimu Vienna. Yebo, kulungile, singeze olunye usuku uhambo Austrian kulolu hlu. Kungani kungcono ukuthi? Awu ngoba Wiener Neustadt (ngaphandle kokuba igama ezihlekisayo), yidolobha amatasatasa esicishe 50,000 abantu, and it’s got it all in terms of things to do.
Kutholwe 30KM nje kusukela Vienna futhi kakhulu eduze komngcele Hungarian-Austrian njengomgijimi ophelele Budapest usuku uhambo ngesitimela, umlando waleli dolobha sika ugcwele izimpi ukulawula kusuka imibuso ehlukahlukene. Naphezu kwalezi zimo ezinhle izimpi- noma mhlawumbe ngenxa yazo – Wiener Neustadt evolved into an important military training ground with the construction of the Maria Theresa Military Academy in the 1700s.
Ukushiya ngemuva esidlule, namuhla Wiener Neustadt iyikhaya imisebenzi eminingi ehlukahlukene, okubandakanya inqwaba izintaba ongaphandle kanye amapaki. Ungavakashela Myra Falls kwabanye izintaba fabulous, noma amabombo Gesaeuse National Park to take in the fresh air.
UMkhandludolobha uphinde has ezikhumbuzo eziningi, iminyuziyamu, nemipheme anikezelwe imidwebo ngomlando walo muzi. Uma lokhu yonke imisindo uthanda kakhulu ngawe – ungakhathazeki. Ngemva kwesikhathi esingaba usuku ngokugcwele emisebenzini amabombo Linsberg Asia Therme Spa ukuze ube sethubeni lokuba kuphole (noma ukuxoxa!) futhi uphumule.
Budapest ukuze Wiener Neustadt
Vienna ukuze Wiener Neustadt
EPrague ukuze Wiener Neustadt
Ibhonasi Sihloko: ePrague
I Czech capital kancane kude kakhulu Budapest usuku uhambo ngesitimela kodwa lo muzi akufanele ezingabanjwanga. Lokho uma uthanda umlando, izakhiwo, ukudla, neziphuzo. Nakuba kungcono cishe 8 amahora ngesitimela Budapest, uma uya ngale ndlela kuwumqondo omuhle ukuthi travel nge Vienna (uyazi, kulowo muzi amangalisayo sishilo ngenhla).
Ngokuvamile engabizi futhi egcwele zezakhiwo ezindala, a kahle walondoloza square medieval, kanye namasistimu okusebenza endala Astronomical Clock emhlabeni, EPrague uyisidingo ukwenza eholidini yakho European. Take it kancane lapha futhi ujabulele abahambahamba yonkana Charles Bridge, igcwaliswe ngo 1402. Noma kangcono ngisho, put on your finest royal uniform and head to Vysehrad for the day to check out the ancient ruins of the former castle.
usuku Budapest Uhambo ngesitimela futhi Budapest yidolobha elihle kakhulu ukuvakashelwa. Kusukela boulevards yayo enhle zokugeza zayo ezidumile ezishisayo, wedolobhakazi ayibalulekile eyodwa miss. Kodwa zisize umusa amabombo zonke ngezikhathi ezithile ukuze uhlole amanye magic yenawo ngokwakho. Noma ngabe ephuza igazi iwayini ezinye inkunzi noma ukweqa off ezweni elisha ngokuphelele, ubone izinto eholidini yakho.
Enye yezindlela ezingcono kakhulu zokwenza Budapest usuku uhambo ngesitimela – ujabulele lula nokuphepha yohambo ngesitimela nokusetshenziswa Londoloza Isitimela!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi “3 Kuhle Budapest Day Uhambo ngu zemininingwane” ungene kusayithi lakho? Ungakhetha ukuthatha izithombe zethu nombhalo futhi asinike credit enesixhumanisi lokhu post blog. Noma chofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-budapest-day-trips-train%2F ‎- (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
Uma ufuna ukuba abe nomusa kubasebenzisi bakho, ungakwazi ukuqondisa kwabo ngqo amakhasi ethu search. Kulesi isixhumanisi, uzothola imizila ethu adumile isitimela – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une izixhumanisi lwethu IsiZulu kokwehla Amakhasi, kodwa siphinde sibe https://www.saveatrain.com/pl_routes_sitemap.xml, futhi ungakwazi ukushintsha / pl ukuba / de noma / es kanye ngezilimi ezingaphezu.
#daytrip #traveleurope Budapest Daytrips Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi TravelBudapest TravelPrague TravelVienna
Okuhambayo Ne Ukukhubazeka EYurophu Made Easy
Qeqesha Ukuhamba eFrance, Qeqesha Ukuhamba Italy, Qeqesha Ukuhamba Spain, Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela, Isitimela Sokuhamba eTurkey, Qeqesha Ukuvakasha UK, Izikhangibavakashi Europe